Nampahery ny Vavolombelona any Rosia sy Ukraine ny Filan-kevi-pitantanana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Basque Bichlamar Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Ga Galoà Goujrati Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kabyle Kannada Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Krio Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mingrelian Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Oromo Pendjabi Persianina Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tahisianina Tajiki Tarasque Tigrigna Tiorka Tlapanèque Tojolabal Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Umbundu Valencienne Vezo Xhosa Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Éwé
Nitsidika tany Ukraine ny Rahalahy Stephen Lett, izay anisan’ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah, tamin’ny 10 sy 11 Mey 2014. Vavolombelona 165 000 no naheno ny lahateniny tamin’izay. Hoy ny vehivavy iray rehefa nandre ny taratasy iray novakin’ny Rahalahy Lett: “Tsapanay hoe tena tiana izahay!”
Nadika tamin’ny fiteny dimy ny lahateny sy ny famakiana an’ilay taratasy, ary nalefa mivantana tany amin’ny Efitrano Fanjakana 700 teo ho eo nanerana an’i Ukraine ilay izy.
Nitsidika an’i Rosia koa i Mark Sanderson, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, tamin’io faran’ny herinandro io. Nisy fandaharana natao ho an’ny rahalahy eran’i Rosia tamin’izay, ka novakina tao koa ilay taratasy. Nadika tamin’ny fiteny 14 ilay fandaharana. Vavolombelona 180 413 no nihaino mivantana an’ilay izy, tany amin’ny fiangonana 2 500 mahery any Bélarus sy Rosia.
Nosoratan’ny Filan-kevi-pitantanana ho an’ny fiangonana rehetra any Rosia sy Ukraine ilay taratasy. Novakin’ny Rahalahy Sanderson tamin’ny teny rosianina ilay izy, ka hoy ny biraon’ny sampana any Rosia: “Tena faly izahay fa tsaroan’ny Filan-kevi-pitantanana. Hoatran’ny hoe namihina anay tsirairay ry zareo.”
Natao hampahery an’ireo Vavolombelona any amin’ny faritra nisy korontana ara-politika ilay taratasy. Nampirisika an’ireo rahalahy mba ‘tsy ho anisan’izao tontolo izao’ izy io, ka tsy hiditra amin’ny politika mihitsy.—Jaona 17:16.
Nampirisihin’ny Filan-kevi-pitantanana àry ny Vavolombelona tany mba hiezaka hifandray amin’i Jehovah foana, ka hivavaka sy hianatra ary hisaintsaina ny Tenin’Andriamanitra. Nampahatsiahy an’ireo Vavolombelona koa izy fa na inona na inona fitsapana mety hihatra amin’izy ireo, dia marina foana ilay fampanantenan’Andriamanitra ao amin’ny Isaia 54:17 hoe: “Tsy hisy hahomby izay fiadiana amboarina hamelezana anao.”
Izao no namaranan’ny Filan-kevi-pitantanana an’ilay taratasiny: “Tena tia anareo rehetra izahay. Mieritreritra anareo foana izahay ary mivavaka ho anareo.”
Nanoratra toy izao momba an’ilay fitsidihana ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Ukraine: “Faly be ireo rahalahy satria tsapany hoe tena tia sy miahy azy ny Filan-kevi-pitantanana. Hita tamin’iny fitsidihan’ny Rahalahy Lett sy Sanderson iny hoe miray saina ny vahoakan’Andriamanitra, ary mikarakara azy ireo i Jehovah sy Jesosy. Tena ara-potoana ilay fitsidihana. Lasa tapa-kevitra izahay fa hanohy hanompo an’i Jehovah, na inon-kidona na inon-kihatra.”
Tsy vitan’ny olombelona mihitsy ny nampilamina ny tany manontolo. Jereo ireo antony maromaro mahatonga izany.
Mety hampisy korontana ve izy ireo?